8 Jul နလေ့ညျခငျး နောကျဆုံးရ ခြဲလျဆီးသတငျးမြား စုစညျးမှု – Sports A2Z
ဘာစီလိုနာအသငျးက အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနတေဲ့ လီယှနျနယျ မကျဆီကို ပွနျချေါယူနိုငျဖို့ ရောငျးခမြယျ့စာရငျးထဲ အှနျထှာ ဂရီးဇျမနျးပါဝငျနပွေီး ကမျးလှမျးမယျ့အသငျးထဲ ခယျြလျဆီးလညျး ပါနသေလို နညျးပွ သောမကျဈ တူဟယျလျကလညျး သူ့ပရိသတျဖွဈနတောကွောငျ့ မကွာမီ ဆှေးနှေးမှုမြား ပွုလုပျသှားဖို့ ရှိနကွေောငျးသိရ။
ခယျြလျဆီးအသငျးက ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတေဲ့ ဘာစီလိုနာ ကှငျးလယျလူ မီရာလမျ ပယာနဈချကြို လနျဒနျမွို့ခံ ပွိုငျဘကျတှဖွေဈတဲ့ စပါးဈအသငျးနဲ့ အာဆငျနယျအသငျးတို့ကပါ စိတျဝငျစားလာခဲ့ပွီး The Metro ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရဆိုရငျ ဂနျးနားတို့ကတောငျ ဘော့စနီးယားသားကို ချေါယူဖို့ အခွအေနပေိုကောငျးနတေယျလို့ ဖျောပွထားကွောငျးသိရ။
ဝကျဈဟမျးအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမား ပျေါလို ဒီကာနီယိုကတော့ အင်ျဂလနျနဲ့ ဝကျဈဟမျးမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဒကျကလနျ ရိုကျဈကို ခယျြလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ ချေါယူလိုတာ မဆနျးကွောငျးနဲ့ ဒကေလနျရိုကျဈက အလှနျကောငျးတဲ့ ကစားသမားဖွဈကွောငျး ခြီးကြူးသှားခဲ့။
လဗောကူဆငျနောကျခံလူ အကျဒျမနျ တကျဘျဆိုဘာကတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့ အပွောငျးအရှသေ့တငျးတှေ ထှကျပျေါနပေမေယျ့ ‌လကျရှိကလပျမှာပဲ ပြျောရှငျနကွေောငျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကစားမှာမဟုတျကွောငျး ပွောခဲ့ပွီး လကျရှိအသငျးက အတျောတိုးတကျလာတဲ့ လူငယျတှနေဲ့ စုစညျးထားတဲ့ အသငျးဖွဈကွောငျး ပွောသှားခဲ့။
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ သူတို့ရဲ့ အဓိကပဈမှတျဖွဈတဲ့ အာလငျး ဟာလနျးအတှကျ ပေါငျသနျး ၁၀၀ နဲ့ကမျးလှမျးတာကို ဒေါ့မှနျက ပယျခခြံရပွီးနောကျ ကစားသမားကလညျး လနျဒနျကလပျကို ပွောငျးခငျြတယျလို့ ပွောခဲ့သလို၊ ခယျြလျဆီးရဲ့ အပွောငျးအရှဂေု့ရုကွီး မာရီနာကလညျး ဒေါ့မှနျအသငျးနဲ့ နောကျတဈကွိမျ နျောဝေးသားအတှကျ ဆှေးနှေးပွီး ပေါငျသနျး ၁၅၀ အထိ တိုးမွှငျ့ကမျးလှမျးသှားဖို့ စီစဉျနတေဲ့ အနအေထားတှကွေောငျ့ ဂြာမနျကလပျအနနေဲ့ လကျခံဖို့ရှိလာကွောငျးသိရ။
ဝုလျဗျအသငျးက သူတို့ရဲ့ တောငျပံကစားသမား အဒါမာ ထရာအိုရေးကို ခယျြလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ ကမျးလှမျးလာဖို့ မြှျောလငျ့နပွေီး ပေါငျသနျး ၄၀ ဝနျးကငျြ လိုခငျြပမေယျ့ ပေါငျ ၂၅ သနျးဝနျးကငျြပဲ လနျဒနျကလပျက ပေးခခြေငျြတာကွောငျ့ ကွနျ့ကွာနရေခွငျးဖွဈကွောငျးသိရ။
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ပဈမှတျ အာလငျး ဟာလနျးကတော့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကို ရောကျသှားတဲ့ ဂဒြေနျ ဆနျခြိုရဲ့ အငျစတာဂရမျက ပို့ဈအောကျမှာ ငိုနတေဲ့ အီမိုဂြီပို့ခဲ့ပွီး အသငျးဖျောဟောငျးနဲ့ ခှဲခှာရလို့လား? ဒါမှမဟုတျ ပွိုငျဘကျအဖွဈ ရငျဆိုငျရမှာကွောငျ့လားဆိုတာ လနျဒနျကလပျ ကမျးလှမျးမယျ့ ပေါငျသနျး ၁၅၀ ဝနျးကငျြကွောငျ့ စိတျဝငျစားစရာဖွဈလာခဲ့။
ခယျြလျဆီးအသငျးက အာလငျး ဟာလနျးကို မရခဲ့ရငျဆိုတဲ့ အစီအစဉျအတှကျ အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး လျောတာရို မာတီနကျဇျကို ချေါယူဖို့ စဉျးစားလာခဲ့ပွီး ငှကွေေးလိုအပျခကျြရှိနတေဲ့ မီလနျမွို့ခံအသငျးကွောငျ့ ချေါယူဖို့ သိပျမခကျခဲနိုငျကွောငျးသိရ။
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ မဆေနျ မောငျ့နဲ့ အနျဒရေ ခရစ်စတနျဆနျတို့က ယူရို ၂၀၂၀ ဆီမီးဖိုငျနယျဖွဈတဲ့ အင်ျဂလနျနဲ့ ဒိနျးမတျတို့ပှဲမှာ သကျဆိုငျရာနိုငျငံအတှကျ အသီးသီးပါဝငျခဲ့ပွီး ခရစ်စတနျဆနျကတော့ ဒဏျရာရသှားသလို လူစားလဲခံလိုကျရတာကွောငျ့ လနျဒနျမွို့ခံအသငျးရဲ့ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ဒဏျရာပွငျးထနျမှာကို စိုးရိမျနကွေ။
ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး တဈနှဈရှိနသေေးတဲ့ အိုလီဗီယေး ဂရြူးကို ချေါယူဖို့ အစေီမီလနျအသငျးအနနေဲ့ ဆှေးနှေးသှားမှာဖွဈပွီး ဒီနှဈနှရောသီအပွောငျးမရှကေ့ာလမှာတငျ အပွီးသတျချေါယူသှားနိုငျဖို့ မီလနျမွို့ခံကလပျအနနေဲ့ စီစဉျထားကွောငျးသိရ။
BT Sport ရဲ့ သုံးသပျသူအဖွဈလုပျကိုငျနတေဲ့ ခရစ်စ ဆပျတနျကတော့ ခယျြလျဆီးကှငျးလယျလူ ဂြျောဂငျြညိုအတှကျ ဘယျလှနျဒေါဆု မရခဲ့တောငျ နီးစပျသငျ့ကွောငျး ပွောသှားခဲ့ပွီး အီတလီအတှကျ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ခွစှေမျးပွနသေလို ခနျြပီယံလိဂျရတဲ့အသငျးရဲ့ အဓိက ကှငျးလယျလူဖွဈတာကွောငျ့ ဘယျလှနျဒေါဆုအ‌တှကျ ထောကျခံသှားခဲ့။
ဘာစီလိုနာအသင်းက အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ လီယွန်နယ် မက်ဆီကို ပြန်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ရောင်းချမယ့်စာရင်းထဲ အွန်ထွာ ဂရီးဇ်မန်းပါဝင်နေပြီး ကမ်းလှမ်းမယ့်အသင်းထဲ ချယ်လ်ဆီးလည်း ပါနေသလို နည်းပြ သောမက်စ် တူဟယ်လ်ကလည်း သူ့ပရိသတ်ဖြစ်နေတာကြောင့် မကြာမီ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိနေကြောင်းသိရ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ မီရာလမ် ပယာနစ်ခ်ျကို လန်ဒန်မြို့ခံ ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ စပါးစ်အသင်းနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းတို့ကပါ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြီး The Metro ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရဆိုရင် ဂန်းနားတို့ကတောင် ဘော့စနီးယားသားကို ခေါ်ယူဖို့ အခြေအနေပိုကောင်းနေတယ်လို့ ဖော်ပြထားကြောင်းသိရ။
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင်ကစားသမား ပေါ်လို ဒီကာနီယိုကတော့ အင်္ဂလန်နဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဒက်ကလန် ရိုက်စ်ကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ ခေါ်ယူလိုတာ မဆန်းကြောင်းနဲ့ ဒေကလန်ရိုက်စ်က အလွန်ကောင်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူးသွားခဲ့။
လေဗာကူဆင်နောက်ခံလူ အက်ဒ်မန် တက်ဘ်ဆိုဘာကတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမယ့် ‌လက်ရှိကလပ်မှာပဲ ပျော်ရွှင်နေကြောင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပြီး လက်ရှိအသင်းက အတော်တိုးတက်လာတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ စုစည်းထားတဲ့ အသင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ အာလင်း ဟာလန်းအတွက် ပေါင်သန်း ၁၀၀ နဲ့ကမ်းလှမ်းတာကို ဒေါ့မွန်က ပယ်ချခံရပြီးနောက် ကစားသမားကလည်း လန်ဒန်ကလပ်ကို ပြောင်းချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့သလို၊ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဂုရုကြီး မာရီနာကလည်း ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် နော်ဝေးသားအတွက် ဆွေးနွေးပြီး ပေါင်သန်း ၁၅၀ အထိ တိုးမြှင့်ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အနေအထားတွေကြောင့် ဂျာမန်ကလပ်အနေနဲ့ လက်ခံဖို့ရှိလာကြောင်းသိရ။
ဝုလ်ဗ်အသင်းက သူတို့ရဲ့ တောင်ပံကစားသမား အဒါမာ ထရာအိုရေးကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ ကမ်းလှမ်းလာဖို့ မျှော်လင့်နေပြီး ပေါင်သန်း ၄၀ ဝန်းကျင် လိုချင်ပေမယ့် ပေါင် ၂၅ သန်းဝန်းကျင်ပဲ လန်ဒန်ကလပ်က ပေးချေချင်တာကြောင့် ကြန့်ကြာနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ပစ်မှတ် အာလင်း ဟာလန်းကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ရောက်သွားတဲ့ ဂျေဒန် ဆန်ချိုရဲ့ အင်စတာဂရမ်က ပို့စ်အောက်မှာ ငိုနေတဲ့ အီမိုဂျီပို့ခဲ့ပြီး အသင်းဖော်ဟောင်းနဲ့ ခွဲခွာရလို့လား? ဒါမှမဟုတ် ပြိုင်ဘက်အဖြစ် ရင်ဆိုင်ရမှာကြောင့်လားဆိုတာ လန်ဒန်ကလပ် ကမ်းလှမ်းမယ့် ပေါင်သန်း ၁၅၀ ဝန်းကျင်ကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အာလင်း ဟာလန်းကို မရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်အတွက် အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး လော်တာရို မာတီနက်ဇ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားလာခဲ့ပြီး ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ မီလန်မြို့ခံအသင်းကြောင့် ခေါ်ယူဖို့ သိပ်မခက်ခဲနိုင်ကြောင်းသိရ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ မေဆန် မောင့်နဲ့ အန်ဒရေ ခရစ္စတန်ဆန်တို့က ယူရို ၂၀၂၀ ဆီမီးဖိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်နဲ့ ဒိန်းမတ်တို့ပွဲမှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအတွက် အသီးသီးပါဝင်ခဲ့ပြီး ခရစ္စတန်ဆန်ကတော့ ဒဏ်ရာရသွားသလို လူစားလဲခံလိုက်ရတာကြောင့် လန်ဒန်မြို့ခံအသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှာကို စိုးရိမ်နေကြ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း တစ်နှစ်ရှိနေသေးတဲ့ အိုလီဗီယေး ဂျရူးကို ခေါ်ယူဖို့ အေစီမီလန်အသင်းအနေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်နွေရာသီအပြောင်းမရွှေ့ကာလမှာတင် အပြီးသတ်ခေါ်ယူသွားနိုင်ဖို့ မီလန်မြို့ခံကလပ်အနေနဲ့ စီစဉ်ထားကြောင်းသိရ။
BT Sport ရဲ့ သုံးသပ်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ခရစ္စ ဆပ်တန်ကတော့ ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ညိုအတွက် ဘယ်လွန်ဒေါဆု မရခဲ့တောင် နီးစပ်သင့်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပြီး အီတလီအတွက် ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ခြေစွမ်းပြနေသလို ချန်ပီယံလိဂ်ရတဲ့အသင်းရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လွန်ဒေါဆုအ‌တွက် ထောက်ခံသွားခဲ့။
ဒိနျးမတျနဲ့ပှဲက အင်ျဂလနျရဲ့ အငွငျးပှားဖှယျရာ ပငျနယျတီကို ဘာကွောငျ့ VAR ခှငျ့ပွုခဲ့သလဲ?